रचना Archives - Page7of 57 - Dr. Nawa Raj Subba
डा. नवराज सुब्बा Shamanism मा Shaman (समन) लाई सामान्यतयाः जान्ने मान्छे वा परम्परागत उपचारक भनेर बुझिन्छ । बोन धर्ममा धामीझाक्री, बौद्ध धर्ममा लामा, हिन्दू धर्ममा पंडित/पुरोहित, लिम्बूमा साम्बा आदि नामले यिनीहरु प्रचलित छन् । आधुनिकीकरणसंगै आजकल यो जनशक्तिको कमी हुन थालेको छ । हिन्दू संस्कार गर्नलाई पंडित पुरोहित यतिन्जेलसम्म त सहज उपलब्ध छन् तर आदिवासी […]
डा. नवराज सुब्बा समाजमा आइपर्ने आफ्ना समस्यालाई आफैले समाधान गर्न अघि सर्नु पर्दछ भन्ने दृष्टान्त मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुन्न पाइन्छ । समाचार कार्यक्रम पछि लगत्तै प्रसार हुने मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम ‘कोशिस’ रेडियो कान्तिपुरमा म नियमित रुपमा सुन्ने गर्दछु । कुनै बेला जीवनको कालखण्डमा आफू पनि मानसिक स्वास्थ्यबाट प्रभावित भएको र हाल […]